I-VTube Studio Apk Khuphela ye-Android [i-Anime ye-2D]-Luso Gamer
I-VTube Studio Apk Khuphela i-Android [i-anime ye-2D]
Umbukeli uyakhuthazwa xa bebona iYouTuber eyahlukileyo ibonisa abalinganiswa abagqibeleleyo be-2D Anime. Nangona kunjalo, abasebenzisi abanakuze babonise kwaye baxelele malunga namaqhinga. Kodwa namhlanje apha sibuyile nale app ifanelekileyo ye-android ebizwa ngokuba yi-VTube Studio Apk.
Ngoku ukudibanisa i Isicelo se-anime iya kuvumela abasebenzisi beselula. Ukukonwabela ukuvelisa i-anime yabo ye-2D ye-Virtual ephilayo yokufaka isicelo esinye se-android. Ewe, abasebenzisi beselula ngoku banokuvelisa ngokulula abalinganiswa abaninzi be-anime.
Inkqubo ibonakala ilula kwaye ayifuni isakhono esongezelelweyo. Nangona kunjalo ngokuqwalasela intuthuzelo yomqhubi weselula, apha siza kuchaza onke amanyathelo abalulekileyo. Abo baya kunceda ekwakhiweni komlinganiswa ogqibeleleyo simahla. Ukuba sele ulungile, khuphela iVTube Studio App.
Yintoni iVTube Studio Apk
I-VTube Studio Apk isebenza kuzo zombini iindlela kwi-intanethi nakwi-intanethi. Ngoku usebenzisa usetyenziso, abaqhubi bemfonomfono banokuvelisa ngokulula abalinganiswa abaninzi be-anime ngaphandle koncedo okanye ikhowudi. Faka nje esi sicelo sikhankanyiweyo kwaye ukonwabele umboniso wasimahla we-anime we-2D ophilayo.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo ngaphambi kokuveliswa kwee-smartphones. Olo khetho belingafikeleleki ebantwini kwaye baziva bediniwe xa besiva ngeempawu ezinjalo. Kuba ukwenza imisebenzi enjalo kuthetha lukhulu kubabukeli.
Ngokuhambela phambili kwetekhnoloji, abantu baqala ukufumana amaqhinga ahlukeneyo. Ezo zinokubanceda ekulawuleni umboniso ogudileyo. Nangona kunjalo, umgangatho unokuthomalalisa kwaye ababukeli banokuziva bengathandeki kakhulu kubasasazi.
Okwangoku, izixhobo ezahlukeneyo ze-intanethi kunye nezikripthi ziyafumaneka. Ezo zinokunceda abasebenzisi ekuboneleleni ngomboniso ogqibeleleyo we-2D. Kodwa xa kufikwa ekufikeleleni kwezo zikripthi kunye nezixhobo, ke abasebenzisi banokufuna ukubhaliswa. Yiyo loo nto sithathela ingqalelo ukufikelela okulula kunye nokusimahla sizise iVTube Studio Android.
igama Isitudiyo seVTube
ubungakanani 156 MB
Igama lepakheji com.denchi.vtubestudio
Iyafuneka i-Android 7.0 kunye noHlanganiso
Enyanisweni, isicelo sikhululekile ukukhuphela kwiwebhusayithi yethu. Kwanenkqubo yokusetyenziswa kunye nofakelo nayo ilula. Khuphela nje ifayile ye-Apk yamva nje kwiwebhusayithi yethu. Emva koko qalisa inkqubo yokuhlohla nqakraza kwifayile.
Ngoku ndwendwela imenyu ephathwayo kwaye uqalise usetyenziso olufakiweyo. Yenza iimvume eziyimfuneko kwaye ufikelele ngokulula kwideshibhodi engundoqo. Ngoku khetha i icon yomlinganiswa kwaye iya kubonisa uluhlu olude lweekhathuni ezahlukeneyo ezinopopayi.
Ikhathuni nganye ineempawu kunye neempawu ezizodwa. Abo banezikripthi zabalinganiswa bangaphandle, ngoko abo bangazingenisa ngokulula ngokukhetha ukhetho lwesandla. Nje ukuba ugqibile ngokhetho, ngoku cofa i icon yegalari ukufikelela kwimixholo yangasemva.
Ukwenza izinto eziphambili, nceda ukhethe iqhosha lokuseta kwaye uguqule ngokulula ukhetho ngokufanelekileyo. Ideshbhodi yokuseta inokunceda ekuguquleni uMlinganiswa, uMculo, iKhamera kunye neenketho zeVidiyo. Khumbula inkqubo yokulandelela ephuculweyo ifakwe ngaphakathi.
Okuthetha ukuba iintloko ezihambayo zinokubonisa ukubonakaliswa okufanayo kubalinganiswa. Abo basebenzisi be-Android abazimisele ukonwabela iimpawu zepro kufuneka bathenge ilayisenisi yepro. Ukuba uyathanda kwaye ukulungele ukuqala itshaneli ye-anime yeYouTube emva koko faka iVTube Studio yokukhuphela.
Ukuhlohla i-app kunika umboniso ophambili wenyani.
Oko kuvumela amalungu ukuba akonwabele ukubonisa abalinganiswa be-anime.
Umboniso we-Live2D uya kunceda ukuhambisa i-anime.
Inzwa yentshukumo ekwinqanaba eliphezulu ifakwe.
Nangona umkhondo wamehlo uyafikeleleka ngaphakathi kwesixhobo se-iPhone.
Nangona kunjalo, eli nqaku alikho kwizixhobo ze-Android.
Akukho ntengiso zomntu wesithathu zivumelekile.
Ukhetho lobhaliso lugcinwa ngokuzithandela.
Akukho rhumo lufunekayo.
Ujongano lwe-app lunobuhlobo.
Imixholo eyahlukeneyo yangasemva iyafumaneka.
Izikripthi zokuchwetheza ezininzi ezinyakazayo ziyafikeleleka.
Uyikhuphela njani iVTube Studio Apk
Esi sicelo se-android siyafikeleleka ukuba sikhuphele kuGoogle Play Store ngokuthe ngqo. Kodwa uninzi lwabaqhubi beselula abakwazi ukufikelela kwifayile ye-Apk ngokuthe ngqo. Isizathu saloo nto kungenxa yokuhambelana kwe-OS kunye nolunye uthintelo.
Ke apho abalandeli banokukhuphela i-Apk ukuba abavumelekanga ukufikelela kwivenkile esemthethweni. Ke ngoko, kwimeko enjalo sicebisa abasebenzisi ukuba bangene kwiwebhusayithi yethu. Kwaye ukhuphele uguqulelo lwamva nje lwefayile yeapp ngokuthe ngqo ngaphandle kokucela imvume.
Ubukho befayile ye-app ngaphezulu kweVenkile yoDlalo kunika isenzo esihle. Oko kuvumela abasebenzisi beselula abanovakalelo ukuba bathembe usetyenziso oluthile. Nokuba sele siyifakile ifayile yeapp kwii-smartphones ezahlukeneyo kwaye asifumananga ngxaki inkulu.
Ezinye izicelo ezihambelana ne-anime ze-android kwabelwana ngazo apha kwiwebhusayithi yethu. Ukuphonononga kwaye ukonwabele ezinye iifayile ze-Apk nceda ulandele amakhonkco anikiweyo. Ezizi Bilibili Comics Apk kwaye Moan Chan Apk.
Ke ngoko ubusoloko uphupha ngokuba nguYouTuber, kodwa ngenxa yento eneentloni. Uhlala ukuphepha ukuthatha inyathelo lokuqala. Kodwa ngoku ukubonisa umlingiswa we-2D Anime endaweni yobuso bokwenyani kuya kunceda abasebenzisi ekubaleni ingxaki yentloni. Ukulungele ukuyizama emva koko ukhuphele i-VTube Studio Apk.
iindidi ukonwatyiswa, apps tags Inkqubo ye-Anime, VTube Studio Android, VTube Studio Apk, VTube Studio App, VTube Studio Khuphela Post yokukhangela
Ukhuphelo lwe-Gappx ye-Android [Fumana imali]